हिन्दू धर्मावलम्बीले चलाएका १० वैज्ञानिक चलन - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
शुक्रबार, फाल्गुन १४, २०७७ Friday 26th February 2021
हिन्दू धर्मावलम्बीले चलाएका १० वैज्ञानिक चलन
प्रकाशित मिति : October 30, 2020
तर वैज्ञानिक रूपमा भन्नुपर्दा दुवै हात जोड्नाले सबै औंलाका टुप्पा जोडिन पुग्छन् र तिनले आँखा, कान र दिमागका चाप विन्दुहरूलाई जनाउँछन् । ती सबैलाई एकैचोटि दबाउँदा चाप विन्दुहरू सक्रिय हुन्छन् जसका कारण हामीले अभिवादन गरिएको व्यक्तिलाई लामो समयसम्म सम्झन मद्दत पुग्छ । अनि कुनै शारीरिक सम्पर्क नभएकाले कीटाणु सर्ने पनि भएन ।
भारतीय हिन्दु महिलाहरूले आफ्नो गोडाको औंलामा औंठी लगाउने गर्छन् । यो विवाहिता महिलाको विशेषता मात्र नभएर यसका पछाडि वैज्ञानिक कारण पनि छ । सामान्यतया औंलाका औंठी दोस्रो औंलामा लगाइन्छ । दोस्रो औंलामा रहेको एक विशेष नसाले गर्भाशयलाई जोड्छ र त्यो मुटुमा पुग्छ ।
मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने मानिसले गर्भगृह, भन्नाले मूर्ति राखेको ठाउँ, मा प्रवेश गर्नुअघि घन्टी बजाउँछन्, बजाउनुपर्छ । आगमशास्त्रका अनुसार घन्टीकोले पाप शक्तिहरूलाई भगाउँछ भने भगवानलाई घन्टीको आवाज सुमधुर लाग्छ । तर यसको वैज्ञानिक कारणका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा घन्टीको ध्वनिले हाम्रो मनलई सफा पारेर हामीलाई जागरुक बनाउन तथा भक्तिको उद्देश्यपूर्तिका लागि पूर्ण ध्यान दिन मद्दत गर्छ ।
७. हात र गोडामा मेहेन्दीरहीना लगाउने चलन
हातमा रंग लगाउनुका अलावा मेहेन्दी एक अत्यन्त शक्तिशाली औषधीय जडीबुटी हो । विवाह प्रक्रिया तनावयुक्त हुन्छन् र प्रायः तनावले टाउको दुख्ने र ज्वरो फुटाउने काम गर्छन् । विवाहको दिन नजिकिँदै गर्दा उत्सुकताका साथ मिसिएको तनावयुक्त पर्खाइले दुलाहा र दुलही दुवैलाई असर पार्छ । मेहेन्दी लगाउँदा अत्यधिक तनावलाई रोकथाम गर्छ किनकि यसले शरीरलाई चिस्याउँछ र नसालाई तनावयुक्त हुन दिँदैन । यही कारणले गर्दा मेहेन्दी हात र गोडाहरूमा लगाइन्छ जहाँ शरीरका नसाका टुप्पाहरू विद्यमान हुन्छन् ।
तपाईं भुइँमा बस्नुहुँदा प्रायः गोडा मारेर बस्नुहुन्छ ः सुखासन वा अर्धपद्मासन । यी आसनले तत्कालै शान्तिको अनुभूति दिलाउँछन् र पाचनमा मद्दत पु¥याउँछन् । यिनले स्वतःस्फुर्त रूपमा पेटलाई पाचन प्रक्रियामा जानका लागि तपाईंको दिमागलाई संकेत दिन्छन् ।
९. उत्तरतर्फ टाउको फर्काएर सुत्नुहुन्न भन्ने विश्वास
वेदमा के छ ?
साथीले धोका त दिइरहेको छैन ?
परीक्षा उत्तीर्ण भएकालाई एक महिनाभित्रै लाइसेन्स
काठमाण्डौंमा बर्ड फ्लु देखियो, १५ हजार कुखुरा नष्ट
पुसदेखि रोकिएको तलब सांसदहरुले एकमुस्ट पाउने
आमाले गरिन् एक वर्षीया छोरीको डोरीले घाँटी कसेर हत्या